Ezona ncwadi zibalaseleyo zikaRafael Tarradas Bultó
Ukufika kukaRafael Tarradas kuncwadi yinto ekhangayo ephikisana neleyibhile, ukuba ayikho i-stigma, yengxelo ye-sagas yentsapho ehambelana neepeni zesifazane. Umbono ke uvula ngaphaya kukaMaría Dueñas okanye uAnne Jacobs, ukucaphula ababhali ababini abayimifuziselo abafakwe kule...
Kuwo nawuphi na omnye umsebenzi okanye ukuzinikezela, abo bafika ngokungalindelekanga babhalwa njengabokuqala phezulu okanye batyholwa ngokwaphula umthetho. Kuyangqinwa ukuba uncwadi luhlala lufumana ngezandla ezishushu nabani na onomdla wokuxela xa esenza njalo ngokuzinikezela kwakhe nawuphi na umbhali olungileyo. ...
Iincwadi ezi-3 ezilungileyo zika-Inés Martín Rodrigo
Umbhali waseMadrid Inés Martín Rodrigo, ophumelele ibhaso likaNadal 2022, udibanisa ibali eliyintsomi elivelayo kunye nezinye iintlobo zeenkxalabo athe wasithumela kolunye uncwadi olutyebisa ngokulinganayo phakathi kwesincoko, ulwazi kunye nobuntatheli. Kwaye kukuba, njengoko benditshilo amaxesha amaninzi, into yobuntatheli ...
Iincwadi ezi-3 eziphezulu zikaRoland Barthes
Ukunxibelelana sisipho. Ulwimi sisixhobo. Umbhali ongumFrentshi uRoland Barthes waphengulula kubunzulu bolwimi ekhangela eyona ntsingiselo yesenzi, isibizo, isichazi... sazo zonke iindidi zamagama kunye neeyunithi zolwimi. Kodwa waphinda wabeka umbono wakhe wepanlinguistic kwi ...
Ezona ncwadi zi-3 zigqwesileyo nguCamila Sosa Villada
Ubuchule obuvela kugxininiso oluthatyathwe kwi-mediocrity, njengakwimeko kaCamila Sosa, ilawula ukunika loo mahluko uyimfuneko kwindawo efana noncwadi, esoloko ifuna ukungafani, ukwahlukana kunye nekhefu kunye nokufana ukuqhubeka nokuba isithuba senkululeko. ukudibana nayo...
Iincwadi ezi-3 eziphezulu zikaHwang Sok Yong
Uncwadi lungqina eyona intrahistories juiciest kuzo zonke iziganeko zembali eziphawulwe vicissitudes geopolitical okwangoku. I-Korea yanamhlanje iyasinda yahlulwe kubini ngumsebenzi kunye nobabalo lwemfazwe ebandayo apho iJamani yakwazi ukubaleka ngo-89 kodwa igcina umkhusane wayo ...
Iincwadi ezi-3 ezilungileyo zikaSantiago Díaz
Isizukulwana sam se-70s sele sigcwele kakuhle neSantiago Díaz. Kungenxa yokuba sibandakanya abanye ababalisi ababalaseleyo abanjengoJuan Gómez Jurado, Mikel Santiago, César Pérez Gellida noPaul Pen. Bonke bephela ngababhali besimanga esinyulu. Iitriller ezinje ngeelori ezinkulu. Kwaye ngendlela uyonwabela ...
Iincwadi ezi-3 ezilungileyo zikaDon Winslow
Umdala uDon Winslow wayengumphandi wabucala ngaphambi kokugxila ngokupheleleyo kubugcisa bakhe bokubhala. Kwaye mhlawumbi ukubek'esweni ukusebenza kweepasile ezahlukeneyo apho acele khona iinkonzo zakhe ezigqityiweyo zisebenza njengesondlo kumabali akhe exesha elizayo. Uhlobo olonwabisayo alunazimfihlo ...
Iphepha1 Iphepha2 ... Iphepha162 Elandelayo →